गुल्मीका राना परिवार जो बिरामी छोराहरुलाई कुकुर थुन्ने खोरमा थुनेर काममा जान्छन् – Gulmiews
गुल्मीका राना परिवार जो बिरामी छोराहरुलाई कुकुर थुन्ने खोरमा थुनेर काममा जान्छन्
५ फाल्गुन २०७३, बिहीबार २३:०९ सन्जु काउछा मगर
काठमाडौं, ५ फागुन । बिरामी सन्तानलाई कुकुर थुन्ने खोरमा थुनेर हिड्ने रहर कसलाई होला र ? बाध्यताले गर्दा काठमाडौंमै यस्तो स्थिति गुजारिरहेको एउटा परिवार फेला परेको छ । दुःख र गरिबीको पीडामा परेका एक आमाबाबुलाई आफनो सन्तान बिरामी भएर आफ्नै घरमा बाँधेर राख्दा कस्तो होला ? आफै अनुमान गरौ त ? गरिबीको चपेटामा परेका एक आमाबाबुलाई बुढेसकालको साहारा भनिएका छोराहरुलाई नै आफ्नै घरमा कुकुर थुन्ने खोरमा बाँधेर राख्नुपर्ने बाध्यताले सारै पिरोलेको छ । काठमाडौको महाराञ्जगञ्जमा डेरा गरी बस्दै आएका गुल्मी जिल्ला भार्से वडा नं ४ का सरस्वती राना र झमन बहादुर राना दम्पतीले आफना दुई छोरालाई खोरमा थुनेर राख्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुले २० वर्षीय जेठो छोरा अनिल राना र १५ वर्षीय सुनिल रानालाई सुस्तमनस्थिति भएकोले खोरमा थुन्ने गरेका छन् । बावु झमन प्रहरी अस्पताल महाराञ्जगञ्जको मेसमा काम र्छन् । आमा अरुको घरमा घरायसी काम गर्छन । आफुहरु दुवै जना अरुको घरमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यताले खोरमा थुन्नुपरेको आमा सरस्वती रानाले बताइन्।
चार भाई छोराका वावु आमा यी दुईभाई छोराको अवस्थालाई लिएर निकै चिन्तित वनेका छन् । उपचार गर्न निकै खर्च लाग्ने भएकाले पनि गरिवीका कारण उपचार गर्न नसकिएको र सुधार केन्द्रमा धेरै पैसा लाग्ने भएकाले राख्न नसकिएको आमा रानाले बताईन् । भविष्यको साहारा भनिएका छोराहरुको यस्तो अवस्था भएकाले पनि छरछिमेक र आफन्तले पनि हेला गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । उनले सहयोग गर्न सवैलाई आग्रह समेत गरेकी छिन् । प्रहरी अस्पतालको मेसमा काम गर्ने वावु झमन रानाको मासिक तलब १६ हजार छ । उनको तलव घरभाडा र खान लाउमा ठिक्क भएकाले उपचार खर्च गर्न नसकिएको र उपचार गर्न सकिदैन भन्ने जवाफ सारै रुन मन लागेको बताउछन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानले यो स्थिति थाहा पाएपछि उद्दार गर्ने भन्दै उनीहरुको घरमा पुगेको थियो । प्रतिष्ठानका सहसचिव दुर्गानाथ दाहालले बच्चालाई खोरमा थुन्ने गरेको थाहा पाएर उद्दार गर्न आएको बताएका छन् । गरिबीले पिरोलेको यो परिवारलाई छोराको उपचार गर्न नसकेर समस्यामा परेको छ । ती बालकहरुको उद्धार गर्न र उपचारमा सहयोग गर्नको लागि बाबुआमाले आग्रह गरेका छन् । -एबिसी टि.भी लाईभबाट